ဗီယက်နမ် (အင်္ဂလိပ်: Vietnam; /ˌviːətˈnɑːm/ ( ); ဗီယက်နမ်: Việt Nam) သို့ ရုံးသုံးအမည်အားဖြင့် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံသည် အရှေ့တောင်အာရှတွင် ရှိပြီး အင်ဒိုချိုင်းနားကျွန်းဆွယ်၏ အရှေ့ဖက်စွန်းတွင် တည်ရှိသော နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် စာရင်းအရ လူဦးရေ ၉၇.၈ သန်း ရှိသဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ၁၆ ခုမြောက် လူဦးရေ အများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီး အာရှတွင် အဋ္ဌမမြောက် လူဦးရေ အများဆုံးနိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ မြောက်ဖက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၊ အနောက်မြောက်ဖက်တွင် လောနိုင်ငံ၊ အနောက်တောင်ဘက်တွင် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနှင့် အရှေ့တောင်ဖက်တွင် မလေးရှားနှင့် ခြားနားထားသော တောင်တရုတ်ပင်လယ်တို့က ဝိုင်းရံထားသည်။ ၁၉၇၅ ခုနှစ် တောင်ဗီယက်နမ် နှင့် မြောက်ဗီယက်နမ်တို့ ပေါင်းစည်းပြီးနောက် မြို့တော်မှာ ဟနွိုင်းမြို့ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
သမိုင်းမတင်မီခေတ် နှင့် ရှေးခေတ်သမိုင်း
ဗီယက်နမ် နိုင်ငံတွင် ဗန်းလန် ဟု သိကြသော ဟုန်ဘုရင်တို့၏ ဟုန်ဘန်းမင်းဆက်သည် ဗီယက်နမ်တို့၏ ပထမဆုံး နိုင်ငံဟု ခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ ဘီစီ ၂၅၇ ခုနှစ်တွင် နောက်ဆုံး ဟုန်ဘုရင်အား သပ်ဖန် မှ အနိုင်ယူခဲ့ပြီး လပ်စ်ဗီယက် နှင့် အောဗီယက်လူမျိုးတို့ကို ပူးပေါင်းကာ အောလပ်စ်နိုင်ငံ အဖြစ် ထူထောင်ခဲ့ကာ အန်းဒုန်ဗွန်းဟူသော ဘွဲ့အမည်ကို ခံယူခဲ့သည်။ ဘီစီ ၂၀၇ ခုနှစ်တွင် တရုတ် စစ်ဗိုလ်ချုပ် ကျောင်တျို မှ အန်းဒုန်းဗွန်းအား အနိုင်ရခဲ့ပြီး အောလပ်စ်နိုင်ငံအား နန်ယူးဒေသအတွင်း သွတ်သွင်းခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ဘီစီ ၁၁၁ ခုနှစ် ဟန်-နန်ယူးစစ်ပွဲ အပြီးတွင် နန်ယူးသည် တရုတ်ဟန်မင်းဆက်၏ အင်ပိုင်ယာ အတွင်းသို့ သွတ်သွင်း ခံခဲ့ရသည်။
၁၈၆၂-၁၉၄၅ ပြင်သစ် အင်ဒိုချိုင်းနား
၁၉၄၆-၅၄ ပထမ အင်ဒိုချိုင်းနား စစ်ပွဲ
၁၉၄၁ ခုနှစ်တွင် မာ့က်ခ်စ်ဝါဒ-လီနင်ဝါဒ စွဲကိုင်ထားသော တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင် ဟိုချီမင်း၏ ဦးဆောင်မှု ဖြင့် ဗီယက်မင်းဟု ခေါ်သော ကွန်မြူနစ် နှင့် အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှု ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ ဟိုချီမင်းသည် ဗီယက်နမ်အား ပြင်သစ်တို့ထံမှ လွတ်လပ်ရေး ရရန်နှင့် ဂျပန်တို့၏ ကျူးကျော်မှု အဆုံးသတ်ရန် ဦးတည် လှုပ်ရှားခဲ့သည်။ ဂျပန်တို့ စစ်ရှုံးပြီး ဗီယက်နမ်ရှိ ၎င်းတို့၏ ရုပ်သေးအစိုးရ ၁၉၄၅ ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင် ပြုတ်ကျပြီးနောက် ဗီယက်မင်းတို့သည် ဟနွိုင်းမြို့ကို သိမ်းပိုက်၍ ယာယီအစိုးရ အဖြစ် စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့တွင် လွတ်လပ်ရေး ကြေငြာခဲ့သည်။ ထိုနှစ် အတွင်းမှာပင် ပြင်သစ်သမ္မတနိုင်ငံ၏ ယာယီအစိုးရအဖွဲ့မှ ပြင်သစ် အရှေ့ဖျားစူးစမ်းရှာဖွေရေးတပ်ဖွဲ့အား ကိုလိုနီအုပ်ချုပ်ရေးကို ပြန်လည် အသက်သွင်းရန် စေလွှတ်ခဲ့သဖြင့် ၁၉၄၆ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် ဗီယက်မင်းတို့မှ ပြင်သစ်တို့အား ပြောက်ကျားစစ်ဆင်ရေးဖြင့် စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ထို့အတွက် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပထမ အင်ဒိုချိုင်းနားစစ်သည် ၁၉၅၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ အထိ ကြာမြင့်ခဲ့သည်။
ဂျီနီဗာ သဘောတူညီချက်အရ ဗီယက်နမ်အား ၂ ပိုင်းကန့်ခြင်းမှာ အမြဲတမ်းအတွက် မရည်ရွယ်ဘဲ ၁၉၅၆ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ အပြီးတွင် ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရန် သဘောတူထားခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ၁၉၅၅ ခုနှစ်တွင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ ဝန်ကြီးချုပ် ငိုဒင်းဒရိန် မှ ၎င်းနှင့် ညီအစ်ကို တော်စပ်သူ ငိုဒင်းနူ ဦးစီးကျင်းပသော မသမာသည့် ဆန္ဒခံယူပွဲဖြင့် ဘောင်ဒိုင်းအား ဖြုတ်ချခဲ့ပြီး မိမိဘာသာ ဗီယက်နမ် သမ္မတနိုင်ငံ၏ သမ္မတ အဖြစ် ကြေငြာခဲ့သည်။
ဟနွိုင်းအစိုးရကို ထောက်ခံသော ဗီယက်ကောင်းတို့က ၁၉၅၀ ခုနှစ်များ၏ နှောင်းပိုင်းတွင် ဒျမ် အစိုးရကို ဖြုတ်ချရန် အတွက် ပြောက်ကျားစစ်ကို စတင် ဆင်နွှဲခဲ့သည်။  ၁၉၅၃ မှ ၁၉၅၆ အတွင်း မြောက်ဗီယက်နမ် အစိုးရသည် လယ်ယာမြေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့တွင် မြေငှားခ လျှော့ချရေး နှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတို့ ပါဝင်ကာ ထို့အတွက်ကြောင့် ထင်ရှားသိသာသော နိုင်ငံရေး ဖိနှိပ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ လယ်ယာမြေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ကာလအတွင်း မြောက်ဗီယက်နမ် မျက်မြင်သက်သေတို့၏ အဆိုအရ ကျေးရွာနေ လူဦးရေ ၁၆၀ တွင် တစ်ယောက်မျှ အသတ်ခံခဲ့ရပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် တွက်ကြည့်မည် ဆိုပါက လူ ၁၀၀,၀၀၀ ခန့် အထိ သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသည်ဟု မှန်းဆနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ထို စစ်ဆင်ရေးမှာ မြစ်နီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွင် အများဆုံး ဖြစ်ပွားခဲ့သဖြင့် ပညာရှင်အများစုက အနည်းဆုံး ၅၀,၀၀၀ ခန့်မျှ အသတ်ခံရမည်ဟု လက်ခံခဲ့ကြသည်။  သို့သော်လည်း ဗီယက်နမ် နှင့် ဟန်ဂေရီတို့၏ ကန့်သတ်စာရွက်စာတမ်းများကို ကန့်သတ် အဆင့်မှ အများသို့ ထုတ်ပြန်သည့် အခါတွင်မူ သတ်ဖြတ်မှုများမှာ ထိုအချိန်က သတင်းရခဲ့သော အရေအတွက်ထက် အလွန်ပင် နည်းပါးလျှက် ရှိပြီး ၁၃,၅၀၀ ကျော်မျှ ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်း ရသည်။  တောင်ပိုင်းတွင်မူ ဒျမ်အစိုးရမှ မြောက်ဗီယက်နမ်တို့၏ အဖျက်အမှောင့် လုပ်ရပ်များ (၁၉၅၆ ခုနှစ် ဗီယက်နမ် အရာရှိ ၄၅၀ ကျော်ကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်း အပါအဝင်) ကို တန်ပြန်သည့် အနေနှင့် ကွန်မြူနစ်ဟု သံသယရှိသူ သောင်းဂဏန်းမျှကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းပြီး နိုင်ငံရေး ပြုပြင်သင်ကြားရေး အကျဉ်းစခန်းများသို့ ပို့ခဲ့သည်။ ထိုအစီအစဉ်မှာ ရက်စက်သော လုပ်ရပ်ဖြစ်ပြီး ကွန်မြူနစ် မဟုတ်သူ အများအပြား ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း ခံခဲ့ရသော်လည်း နိုင်ငံအတွင်းရှိ ကွန်မြူနစ်တို့၏ လှုပ်ရှားမှုများကို ထိုအတောအတွင်း ဟန့်တားနိုင်ခဲ့သည်။ ထိုအစီအစဉ် အတွင်း လူ ၂,၁၄၈ ဦးမျှ သေဆုံးခဲ့ရသည်ဟု မြောက်ဗီယက်နမ်အစိုးရမှ ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့သည်။ ၁၉၆၀ နှင့် ၁၉၆၂ တို့တွင် ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုနှင့် မြောက်ဗီယက်နမ်တို့ ကြား ဆိုဗီယက်မှ စစ်ရေး အထောက်အပံ့များ ဆက်လက် ပေးအပ်သွားရန် သဘောတူ စာချုပ်များကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
၁၉၇၆ မှ ယခု ပြန်လည် ပေါင်းစည်းခြင်း နှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး
စစ်ပွဲအပြီး လဲဒွမ် အစိုးရ၏ လက်ထက်တွင် အမေရိကန် သို့မဟုတ် ဆိုင်းဂုံ အစိုးရ နှင့် ပူးပေါင်းသော တောင်ဗီယက်နမ်သားများကို အနောက်နိုင်ငံများမှ စိုးရိမ်ထား သကဲ့သို့ အစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခြင်းမျိုး မရှိခဲ့ပေ။ သို့သော်လည်း တောင်ဗီယက်နမ်သား ၃၀၀,၀၀၀ ကျော်ကို ပြန်လည်ပြုပြင်သင်ကြားရေး အကျဉ်းစခန်းများသို့ ပို့ခဲ့ပြီး အများစုမှာ အလုပ်ကြမ်းများကို အတင်းအကြပ် စေခိုင်းခံရပြီး ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှု၊ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု နှင့် ရောဂါဘယ များဖြင့် ရင်ဆိုင်ကြရသည်။ အစိုးရမှ လယ်ယာမြေများ နှင့် စက်ရုံများကို စုပေါင်းပိုင်ဆိုင်သော စနစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်းကို အကြီးအကျယ် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။  ထို့အတွက်ကြောင့် စီးပွားရေး မတည်ငြိမ်မှုများ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဂဏန်း ၃ လုံး အထိ ငွေကြေး ဖောင်းပွခြင်း ဖြစ်ပွားခဲ့ကာ နိုင်ငံပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး အတွက် ကြိုးပမ်းမှုများကို နှေးကွေးစေခဲ့သည်။ ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင် ဗီယက်နမ် စစ်တပ်သည် ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံသို့ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ဗီယက်နမ် နယ်စပ်ရှိ ရွာများကို တိုက်ခိုက်လျှက် ရှိသော ခမာနီ အစိုးရကို ဖြုတ်ချရန်အတွက် ဖြစ်သည်။  ထိုစစ်ပွဲတွင် ဗီယက်နမ်တို့ အောင်ပွဲခံခဲ့ပြီး ၁၉၈၉ ခုနှစ် အထိ ကမ္ဘောဒီးယားကို အုပ်ချုပ်သော အစိုးရ တစ်ရပ်ကို တင်မြှောက်နိုင်ခဲ့သည်။  ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းက တရုတ်တို့နှင့် ဆက်ဆံရေးကို ပျက်ပြားစေခဲ့ပြီး တရုတ်တို့က ၁၉၇၉ ခုနှစ်တွင် ဗီယက်နမ် မြောက်ပိုင်းကို ခဏတာမျှ ကျူးကျော် ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ထိုပဋိပက္ခကြောင့် ဗီယက်နမ်တို့ အနေနှင့် ဆိုဗီယက်ထံမှ စီးပွားရေးနှင့် စစ်ရေး အကူအညီများပေါ်တွင် ပိုမို၍ မှီခိုခဲ့ရသည်။
ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတနိုင်ငံသည် တရုတ်နိုင်ငံ၊ ကျူးဘားနိုင်ငံနှင့် လောနိုင်ငံတို့နှင့်အတူ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကွန်မြူနစ် စနစ် ကျင့်သုံးသော တစ်ပါတီ ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံ ၄ နိုင်ငံတွင် တစ်ခု အပါအဝင် ဖြစ်သည်။ လက်ရှိ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကွန်မြူနစ်ပါတီကသာ အစိုးရ၊ နိုင်ငံရေး နှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းတို့၏ အစိတ်အပိုင်း အားလုံးတွင် အဓိက အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိသည်။ ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးသည် စီမံခန့်ခွဲရေး နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး တာဝန် အများအပြားကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပြီး ပါတီ၏ နိုင်ငံတော်အဆင့် ဖွဲ့စည်းမှုဆိုင်ရာ အလုပ်၊ နိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ ရာထူး ခန့်အပ်မှု အလုပ်များ အပြင် မူဝါဒ ချမှတ်မှုများကို ချုပ်ကိုင်ထားသည်။ ကွန်မြူနစ် ပါတီနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေသော သို့မဟုတ် ကွန်မြူနစ်ပါတီမှ ထောက်ခံသော နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းများသာလျှင် ဗီယက်နမ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ခွင့် ရှိသည်။ ထိုအဖွဲ့အစည်းများတွင် ဗီယက်နမ် အဖမြေ တပ်ဦး၊ အလုပ်သမားနှင့် ကုန်သည် သမဂ္ဂပါတီများ ပါဝင်သည်။ နိုင်ငံတော် အနေနှင့် ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒကို ယုံကြည်ချက် အဖြစ် စွဲကိုင်ထားသည် ဆိုသော်လည်း ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေး ပေါ်လစီများမှာ အရင်းရှင်စနစ်ဖက်သို ပို၍ တိမ်းညွှတ်လာလျှက် ရှိသည်။  အီကော်နောမစ် မဂ္ဂဇင်းမှ ဗီယက်နမ်၏ ဦးဆောင်မှုကို "အရင်းရှင် စိတ် ထက်သန်သော ကွန်မြူနစ်များ" ဟု သမုတ်ခဲ့သည်။
ဗီယက်နမ်၏ သမိုင်းကြောင်း တလျှောက်တွင် အဓိက နိုင်ငံခြား ဆက်ဆံရေးမှာ ၎င်း၏ အကြီးဆုံးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံနှင့် တစ်ချိန်က နယ်ချဲ့ အုပ်စိုးသူ ဖြစ်ခဲ့ဖူးသော တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ဖြစ်သည်။ ဗီယက်နမ်၏ အချုပ်အခြာ အာဏာဆိုင်ရာ မူများနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ လွတ်လပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော သန္ဒိဋ္ဌာန်များကို ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ အတွင်း စာပေအမြောက်အများတွင် ကမ္ဗည်းထက် မော်ကွန်းတင်ထားခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဆိုရလျှင် ၁၁ ရာစု မျိုးချစ်ကဗျာ ဖြစ်သော "တောင်ပိုင်းနိုင်ငံ၏ တောင်တန်းနှင့်မြစ်များ" ကဗျာ နှင့် ၁၄၂၈ ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေးကြေငြာစာတမ်းတို့တွင် တွေ့နိုင်သည်။ တရုတ်နှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့သည် တရားဝင်အားဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးရနေကြသော်လည်း နယ်နိမိတ် အငြင်းပွားမှု နှင့် ပတ်သက်သော တင်းမာမှု နိုင်ငံနှစ်ခု အကြားတွင် အထင်အရှား ရှိနေသည်။
လက်ရှိ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားရေး ပေါ်လစီနှင့် ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းစဉ် ကြေငြာချက်မှာ "လွတ်လပ်ရေး၊ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ အတွက် တသမတ်တည်းရှိသော နိုင်ငံခြားရေး ပေါ်လစီကို အကောင်အထည်ပေါ်ရန်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ အမျိုးမျိုးအစားစား ကွဲပြားမှု နှင့် နိုင်ငံအများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တို့ ဖြစ်စေမည့် နိုင်ငံခြားရေး ပေါ်လစီ ဖြစ်စေရန်၊ နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွင် ကြိုတင်ဖန်တီးသူ သို့မဟုတ် တက်ကြွစွာ ပါဝင်သူ ဖြစ်ရန် နှင့် အခြားကဏ္ဍများတွင်လည်း တက်ကြွစာ ပါဝင်သူ ဖြစ်စေရန် " ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ဆက်လက်၍ ကြေငြာထားသည်မှာ "ဗီယက်နမ်သည် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းရှိ နိုင်ငံအားလုံး၏ မိတ်ဆွေ နှင့် အားကိုးရသော မိတ်ဖက်နိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာ နှင့် ဒေသတွင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်လျှက် ရှိသည်။" ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
တြိဂံပုံစံရှိပြီး ၅,၇၉၂ စတုရန်းမိုင် (၁၅,၀၀၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာ) ရှိသော မြစ်နီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသသည်  မဲခေါင်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသထက် ပို၍ သေးငယ်သော်လည်း ပိုမို၍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး လူဦးရေလည်း ပို၍ သိပ်သည်းသည်။ ယခင်က တုန်ကင်ပင်လယ်ကွေ့၏ ဝင်ပေါက်ဖြစ်ခဲ့သော မြစ်နီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသသည် နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာ အတွင်း တင်ကျန်နေခဲ့သော နုန်းမြေ အနည်များဖြင့် ပြည့်ဝလျှက် ရှိသည်။ ၁၅,၄၄၄ စတုရန်းမိုင် (၄၀,၀၀၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ) မျှ ကျယ်ဝန်းသော မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသသည် မည်သည့်နေရာတွင် မှ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ထက် ၁၀ပေ (၃ မီတာ) ထက် ပို၍ မမြင့်ပေ။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသအတွင်း မြစ်များနှင့် တူးမြောင်းများ ဟိုမှသည်မှ ဖြတ်လျှက် တည်ရှိပြီး ၎င်းတို့မှ အနည်အများအပြားကို ပို့ချသဖြင့် မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသသည် တစ်နှစ်လျှင် ပင်လယ်တွင်းသို့ ၁၉၇ ပေ မှ ၂၆၃ပေ (၆၀ မီတာ မှ ၈၀ မီတာ) အထိ ဆန့်ထွက်လျှက် ရှိသည်။
ဂေဟစနစ် နှင့် ဇီဝမျိုးကွဲများ
ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း၊ သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ လုပ်ငန်းနှင့် ဟိုင်းတက်ခ် လုပ်ငန်း တို့မှာ နိုင်ငံစီးပွားရေး၏ ကြီးမားသော အစိတ်အပိုင်း နှင့် အလျှင်မြန်ဆုံး တိုးတက်သော အစိတ်အပိုင်း တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဗီယက်နမ်သည် ရေနံလုပ်ငန်းတွင် နောက်ကျမှ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်သော နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်သော်လည်း ယခုအခါ အရှေ့တောင်အာရှတွင် တတိယ အကြီးဆုံး ရေနံထုတ်လုပ်သည့် နိုင်ငံ ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် တစ်နေ့လျှင် ရေနံစည်ပေါင်း ၃၁၈,၀၀၀ စည် (၅၆,၀၀၀ ကုဗမီတာ) မျှ ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ဗီယက်နမ်သည် အာရှ-ပစိဖိတ် ဒေသတွင် အဋ္ဌမမြောက် အများဆုံး ရေနံစိမ်း ထုတ်လုပ်သည့် နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်ခဲ့သည်။  ၎င်း၏ အိမ်နီးချင်း တရုတ်နိုင်ငံကဲ့သို့ပင် ဗီယက်နမ်သည် ငါးနှစ်တာ အတွက် ဗဟိုမှ ရေးဆွဲသော စီမံကိန်းများကို ဆက်လက် အသုံးချဆဲ ဖြစ်သည်။
၂၀၀၀ ခုနှစ်များ၏ အစောပိုင်းမှ အစပြု၍ ဗီယက်နမ်သည် ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ လျှော့ပေါ့မှုများကို ဆက်တိုက် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တစ်ဖက်မှ အချို့သော စီးပွားရေး ကဏ္ဍများတွင် နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက်သို့ ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ သလို အချို့သော ကဏ္ဍများအား ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းခဲ့ခြင်းအားဖြင့် နှစ်လမ်းသွား နည်းလမ်းကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ဗီယက်နမ်သည် ၎င်းတို့၏ ဉာဏမူပိုင်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ ဥပဒေများကို ထရစ်ပ် သဘောတူညီချက် နှင့်အညီ ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်တွင် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဗီယက်နမ်သည် ယခုအခါတွင် အာရှ၏ အပွင့်လင့်ဆုံး စီးပွားရေးစနစ်ရှိသော နိုင်ငံများတွင် တစ်ခုအပါအဝင် ဖြစ်နေပြီး အသွားအပြန် ကုန်သွယ်မှု တန်ဖိုးမှာ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ဂျီဒီပီ၏ ၁၆၀% မျှ ရှိနေသဖြင့် တစ်ချိန်တည်းတွင်ရှိသော တရုတ်၏ အချိုးထက် နှစ်ဆများ များနေပြီး အိန္ဒိယ၏ အချိုးထက် ၄ ဆ မျှ များနေသည်။ ဗီယက်နမ်၏ အဓိက ကုန်သွယ်ဖက် နိုင်ငံများတွင် တရုတ်၊ ဂျပန်၊ ဩစတြေးလျ၊ အာဆီယံ နိုင်ငံများ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နှင့် အနောက်ဥရောပနိုင်ငံများ ပါဝင်သည်။
ဗီယက်နမ် အကောက်ခွန်ဌာန၏ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ အစီရင်ခံစာအရ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ပထမ နှစ်တစ်ဝက်တွင် နိုင်ငံတကာ ကုန်ပစ္စည်းများကုန်သွယ်မှုမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂၄ ဘီယံ အထိ ရှိပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ် ထိုအချိန်ကာလနှင့် နိုင်းယှဉ်ပါက ၁၅.၇% မျှ ပို၍ မြင့်မားသည်ကို တွေ့ရသည်။ မိုဘိုင်းဖုန်း နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို အမြောက်အများ တင်ပို့မှု တင်သွင်းမှု ပြုလုပ်ပြီး သဘာဝ အရင်းအမြစ် ဈေးကွက်တွင် အမြင့်ဆုံးတင်ပို့မှုမှာ ရေနံစိမ်း ဖြစ်ပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပင် သံ နှင့် စတီးလ် များကို အများဆုံးတင်သွင်းခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။ အမေရိကန်သည် ဗီယက်နမ်၏ တင်ပို့မှု အမြောက်အများကို ဝယ်ယူသော နိုင်ငံဖြစ်ပြီး တင်သွင်းမှု အများဆုံးမှာ တရုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ ဖြစ်သည်။ 
ဗီယက်နမ် ပညာရှင်များသည် ဘုရင်ခေတ်မှ အစပြု၍ အများအပြားသော ပညာရပ်နယ်ပယ်များတွင် တိုးတက်စေရန် ကြံဆောင်ခဲ့ကြပြီး အထူးသဖြင့် လူမှုရေးသိပ္ပံ ပညာရပ်များနှင့် လူသားဆိုင်ရာ ပညာရပ်များတွင် ဖြစ်သည်။ ဗီယက်နမ်တွင် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု သမိုင်းပညာရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာသော သမိုင်းကြောင်း ရှိသည်။ ၁၃ ရာစုတွင် နန်းစွန့်ခဲ့သော ဧကရာဇ် ထရန်နန်တောင်သည် ဘုန်းကြီးများကို ဦးဆောင်၍ ဒဿနိကဗေဒ၏ ဘာသာရပ်ခွဲတစ်ခု ဖြစ်သော ထရပ်လမ်ဇန် ဘာသာရပ်ကို တိုးတက်စေရန် ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။ ပေါင်းနှုတ်မြှောက်စား နှင့် ဂျီဩမေတြီ ပညာရပ်များကို ၁၅ ရာစုမှ စတင်၍ ဗီယက်နမ်တွင် လူအမ်သာဗင်း၏ ဖတ်စာအုပ်ပေါ်တွင် အခြေခံ၍ သင်ကြားခဲ့ကြသည်။ လူအမ်သာဗင်းသည် ဗီယက်နမ်အား သုည နှင့် စတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး မာ့ခ်ဟျန်တစ်ချ်မှ အနှုတ်ကိန်းများကို မသိကိန်း၊ လျို့ဝှက်ကိန်း နှင့် ဝှက်ကိန်းများကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင် ဗီယက်နမ် ပညာရှင်များသည် စွယ်စုံကျမ်း အများအပြားကို ရေးသား ထုတ် ဝေခဲ့သည်။
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် အများပြည်သူသုံး အဓိက လေဆိပ် ၂၁ ခုရှိပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် ၃ ခု ရှိသည်။ ၎င်းတို့မှာ ဟနွိုင်းမြို့ရှိ နွိုင်းဘိုင်လေဆိပ်၊ ဒါနန်းရှိ ဒါနည်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် နှင့် ဟိုချီမင်းစီးတီးရှိ တန်ဆွန်းညက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် တို့ ဖြစ်ကြသည်။ တန်ဆွန်းညက်သည် နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးလေဆိပ်တစ်ခု ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာခရီးသည်များ၏ ၇၅% ကို လက်ခံ ပို့ဆောင်ပေးလျှက် ရှိသည်။ နိုင်ငံတော်မှ သဘောတူထားသော အစီအစဉ်အရ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် ၁၀ ခု အထိ ရှိလာမည် ဖြစ်သည်။ ထိုလေဆိပ်များတွင် ဗင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်၊ ဖူးဘိုင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်၊ ကမ်ရန်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်၊ ဖူးကောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်၊ ကက်ဘီ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်၊ ကန်သိုး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် နှင့် လောင်သမ်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်တို့ ပါဝင်သည်။ အစီအစဉ်ထဲတွင် ပါဝင်သော လောင်သမ်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် အပြည့်အဝ တည်ဆောက်ပြီးစီးပါက တစ်နှစ်လျှင် ခရီးသည် သန်း ၁၀၀ ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရှိ လမ်းများတွင် ဗဟိုမှာ စီမံခန့်ခွဲသော နိုင်ငံတော်အဆင့်လမ်းများ၊ ပြည်နယ်များမှ စီမံခန့်ခွဲသော ပြည်နယ်အဆင့်လမ်းများ၊ ခရိုင်မှ စီမံခန့်ခွဲသော ခရိုင်အဆင့် လမ်းများ၊ မြို့တော်နှင့် မြို့များမှ စီမံခန့်ခွဲသော မြို့ပြလမ်းများ နှင့် ကွန်မြူးမှ စီမံခန့်ခွဲသော ကွန်မြူးအဆင့်လမ်းများတို့ ပါဝင်သည်။ ဗီယက်နမ်ရှိ မြို့ပြဧရိယာများတွင် စက်ဘီးများ၊ စက်တပ် စကူတာများ၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်များသည် လူသုံးများသော ယာဉ်များ အဖြစ် ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် မြို့ကြီးများတွင် မော်တော်ယာဉ် ပိုင်ဆိုင်မှုမှာ မြင့်တက်လာလျှက် ရှိသည်။ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများမှ ပြေးဆွဲသော အများပြည်သူသုံး ဘတ်စ်ကားများသည် လူအများစုမှ ခရီးဝေးသွားရာတွင် အဓိက သုံးစွဲလျှက် ရှိကြသည်။
ယာဉ်အန္တရာယ် လမ်းအန္တရာယ်မှာ ဗီယက်နမ်တွင် အလွန်ဆိုးရွားသော ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး နေ့စဉ် ပျမ်းမျှ လူ ၃၀ ခန့် ယာဉ်မတော်တဆမှုဖြင့် သေဆုံးကြသည်။  ဟနွိုင်းမြို့နှင့် ဟိုချီမင်းစီးတီးမြို့များတွင် ယာဉ်ကြောကြပ်တည်းမှုမှာ ဆိုးရွားလာသော ပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်ပြီး မြို့တော်များ၏ လမ်းများအား မော်တော်ယာဉ်သုံးစွဲမှု မြင့်တက်လာခြင်းနှင့် ကာမိစေရန် အပြင်းအထန် ကြိုးပမ်းလျှက် ရှိကြသည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ဗီယက်နမ် နိုင်ငံ နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတို့သည် ဂျပန်နည်းပညာကို အသုံးပြုထားသော အမြန်ရထားလမ်း ဆောက်လုပ်ရန် သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပြီး ဗီယက်နမ် အင်ဂျင်နီယာ အမြောက်အများကို ဂျပန်သို့ စေလွှတ်၍ အမြန်ရထားများအတွက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများကို သင်ယူစေခဲ့သည်။ ထိုရထားလမ်းမှာ ၁,၆၃၀ ကီလိုမီတာမျှ ရှည်လျားသော အမြန်ရထားလမ်း ဖြစ်လာမည်ဖြစ်ပြီး  စုစုပေါင်း ဘူတာရုံ ၂၆ ခု ရှိမည်ဖြစ်ကာ ဟနွိုင်းမြို့ နှင့် ဟိုချီမင်းစီးတီးရှိ သူသျမ် ဘူတာတို့လည်း ပါဝင်မည် ဖြစ်သည်။  ဂျပန်ရှိ ရှင်းကန်းဆင်ခေါ် ကျည်ဆန်ရထား နည်းပညာ ကို အသုံးပြုမည် ဖြစ်ပြီး ထိုရထားလမ်းတွင် အမြန်ဆုံး တစ်နာရီ မိုင် ၂၂၀ (၃၆၀ ကီလိုမီတာ) မျှ မြန်သော ရထားများ သွားလာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ဟနွိုင်းမှ ဗင်း၊ နာထရန်နှင့် ဟိုချီမင်း စီးတီးသို့ စတင်ဖောက်လုပ်မည် ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အတွင်းတွင် ဗင်းနှင့် နာထရန် အကြား ရထားလမ်း နှင့် ဟနွိုင်းမြို့နှင့် မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်များ ဖြစ်ကြသော လောင်ကိုင်း နှင့် လန်ဆွန်းတို့သို့ ဆက်သွယ်သော ရထားလမ်းများကို စတင်ဆောက်လုပ်မည် ဖြစ်သည်။
ကမ်းရိုးတန်းနိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်သည့် ဗီယက်နမ်တွင် အဓိက ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်း အများအပြား ရှိပြီး ၎င်းတို့တွင် ကမ်ရန်း၊ ဒါနန်း၊ ဟိုင်ဖုန်း၊ ဟိုချီမင်းစီးတီး၊ ဟောင်ဂိုင်း၊ ကွီးနွန်၊ ဗန်ထော နှင့် နာထရန် တို့ ပါဝင်သည်။ ကုန်းတွင်း ပိုကျသော အပိုင်းတွင် ဗီယက်နမ်ရှိ မြောက်များလှသော မြစ်များသည် ကျေးလက်ဒေသ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင် အဓိကကျသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေပြီး ၁၁,၀၀၀ မိုင် (၁၇,၇၀၀ ကီလိုမီတာ) မျှ ရှိသော ကူးသန်းသွားလာနိုင်သော ရေကြောင်းခရီးတွင် ဖယ်ရီများ၊ ဝမ်းပြားရေယာဉ်များ နှင့် ကုတို့သင်္ဘောများ သွားလာလျှက် ရှိကြသည်။ 
ထို့ပြင် မဲခေါင်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ နှင့် မြစ်နီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတို့သည် ဗီယက်နမ်၏ လူမှုရေးနှင့် စီးပွားရေးကိစ္စရပ်များ အတွက် အလွန်အရေးပါဒေသများ ဖြစ်ကြသည်။ နိုင်ငံ၏ လူဦးရေ အများစုမှာ ထိုမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသများ တလျှောက် သို့မဟုတ် မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသများ၏ အနီးအနားတွင် နေထိုင်လျှက် ရှိကြပြီး အဓိက မြို့ကြီးများ ဖြစ်ကြသော ဟိုချီမင်းစီးတီးမြို့ နှင့် ဟနွိုင်းမြို့တို့သည် မဲခေါင် နှင့် မြစ်နီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသများ အနီးတွင် တည်ရှိကြသည်။ တောင်တရုတ်ပင်လယ် အတွင်းတွင်မူ ဗီယက်နမ်သည် လက်ရှိ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အခြား အနီးအနားရှိ နိုင်ငံများ နှင့် ကာလရှည်ကြာ ပိုင်ဆိုင်မှု အငြင်းပွား နေသော စပရက်ထလီကျွန်းများ ၏ အများစုကို ထိန်းချုပ်ထားသည်။
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ ရေပေးဝေမှုနှင့် သန့်ရှင်းရေးတွင် အောင်မြင်မှုများ ရှိသကဲ့သို့ စိန်ခေါ်မှုများလည်း ရှိနေသည်။ အောင်မြင်မှုများထဲတွင် ၁၉၉၀ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၁၀ ခုနှစ် များအတွင်း ရေပေးဝေမှုနှင့် သန့်ရှင်းသော ရေရရှိမှု သိသိသာသာ တိုးတက်လာခဲ့ပြီး ရေမီတာများကို နေရာအမြောက်အများတွင် တပ်ဆင်နိုင်ခဲ့ကာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှ စ၍ ရေဆိုးသန့်စင်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပို၍ များလာခဲ့သည်။ စိန်ခေါ်မှုများတွင်မူ ရေထုညစ်ညမ်းမှုများ အများအပြား ရှိနေခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှု ညံ့ဖျင်းခြင်း နှင့် ကျေးလက်ဒေသများတွင် တိုးတက်လာသော ရေသန့်စင်ရေး လုပ်ငန်းများ မလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း၊ ကျေးလက်ဒေသရှိ ရေစနစ်ကို ရေရှည်ထိန်းသိမ်းမှု ပြုလုပ်ရာတွင် ညံ့ဖျင်းခြင်း၊ မြို့ပြ ရေသန့်စင်ရေးတွင် သုံးစွဲထားသလောက် ငွေကြေး အလုံအလောက် ပြန်လည် မရရှိခြင်း၊ ဗီယက်နမ်၏ စီးပွားရေးတိုးတက်လာသည်နှင့် အမျှ အလှူရှင်များမှ လှူဒါန်းငွေအစား ချေးငွေအသွင်သို့ ပြောင်းလဲကြသဖြင့် နိုင်ငံခြား အထောက်အပံ့များ နှင့် ချေးငွေများ လျော့နည်းလာခြင်း တို့ ဖြစ်ကြသည်။ အစိုးရမှ ရေခွန် ကောက်ခံရငွေမှ ကုန်ကျစရိတ်များကို ကာမိရန် လုပ်ဆောင်ခြင်း နှင့် ပြည်နယ်အဆင့်တွင် အလိုအလျောက် ရေပေးဝေမှု စနစ်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ပေါ်လစီများ တစိတ်တပိုင်းသာ အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ရေခွန်မှာ ဈေးပေါမြဲသာ ရှိနေပြီး အချို့သော သုံးစွဲမှုများတွင် ခွင့်ပြုထားသည့် အလုပ်ထက်ပို၍ အခြား အလုပ်များကို လုပ်ဆောင်လျှက် ရှိကြသည်။
ကိုလိုနီစနစ်၏ အမွေတစ်ခု အနေနှင့် ပညာတတ် ဗီယက်နမ် အချို့သည် ပြင်သစ်ဘာသာစကားကို အသုံးပြု ပြောဆိုကြသည်။ အထူးသဖြင့် လူကြီးပိုင်းများ နှင့် ယခင် တောင်ဗီယက်နမ်တွင် ပညာသင်ယူခဲ့ကြသူများမှလည်း အသုံးပြုကြသည်။ ပြင်သစ်ဘာသာစကားကို အုပ်ချုပ်ရေး ၊ ပညာရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးတို့တွင်လည်း အသုံးပြုကြသည်။ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသည် ပြင်သစ်ဘာသာစကားကို အဓိကပြောဆိုသော ဖရန်ကိုဖုန်းနီ အဖွဲ့၏ တင်းပြည့်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး ပညာရေးတွင်လည်း ပြင်သစ်ဘာသာနှင့် ပတ်သက်သည့် စိတ်ဝင်စားမှုများ ပြန်လည်ရှင်သန်လာလျှက် ရှိသည်။စစ်အေးတိုက်ပွဲကာလ အတွင်းက ဆိုဗီယက်အုပ်စုနှင့် အဆက်အဆံရှိသော ဗီယက်နမ် မိသားစု အချို့တွင် ရုရှားဘာသာစကား နှင့် အချို့ မိသားစု အနည်းငယ်တွင် ဂျာမန်ဘာသာ၊ ချက်ဘာသာ နှင့် ပိုလန်ဘာသာ တို့ကို နားလည်တတ်ကျွမ်းကြသည်။  လတ်တလော နှစ်များတွင် ဗီယက်နမ်နှင့် အနောက်နိုင်ငံများ ဆက်ဆံမှု ပိုမိုများပြား လာသဖြင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမှာ ဒုတိယ ဘာသာစကားအဖြစ် ရေပန်းစားလာခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို သင်ယူခြင်းမှာ ကျောင်းအများစုတွင် မသင်မနေရ ဖြစ်လာခဲ့ပြီး အချို့ကျောင်းများတွင် ပြင်သစ်ဘာသာစကား နှင့် အတူ သင်ကြားရကာ ကျောင်းအများအပြားတွင် ပြင်သစ်ဘာသာအစား အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို အစားထိုး သင်ကြားလာကြသည်။ ဗီယက်နမ် နှင့် အခြားအရှေ့အာရှ နိုင်ငံများ၏ ဆက်ဆံရေးမှာ ပိုမိုအားကောင်းလာသဖြင့် ဂျပန်ဘာသာစကား နှင့် ကိုရီးယား ဘာသာစကားတို့လည်း ပို၍ ရေပန်းစားလာလျှက် ရှိသည်။
ဗီယက်နမ် အစိုးရသည် ရိုမန်ကက်သလစ် အယူဝါဒပေါ်တွင် မယုံသင်္ကာမှု များပြားသည်ဟု အများက ရှုမြင်ကြသည်။ ထိုသို့ မယုံကြည်ရခြင်း၏ ဇာစ်မြစ်မှာ ၁၉ ရာစု အတွင်းက ကက်သလစ် ဘာသာဝင် အချို့က ပြင်သစ်ကိုလိုနီ နယ်ချဲ့များနှင့် ပူးပေါင်း၍ နိုင်ငံကို သိမ်းပိုက်အုပ်ချုပ်ရာတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ခြင်း နှင့် ပြင်သစ်တို့မှ ၁၈၃၃ ခုနှစ် လီဗန်ခွိုင် ပုန်ကန်မှု အတွင်း ကက်သလစ် ဘုရင်ကို ခန့်အပ်ရန် ကြိုးစားရာတွင် ကူညီခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ကက်သလစ် ဘုရားကျောင်း၏ ကွန်မြူနစ် စနစ်ကို ဆန့်ကျင်သော အတွေးအခေါ်ကြောင့်လည်း ဗီယက်နမ် အစိုးရ၏ ရန်သူ ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ဗာတီကန် ဘုရားကျောင်းကို ဗီယက်နမ်တွင် တရားဝင် ပိတ်ပင်ထားပြီး အစိုးရမှ ထိန်းချုပ်ထားသော ကက်သလစ် အဖွဲ့အစည်းများကိုသာ ခွင့်ပြုထားသည်။ သို့သော်လည်း ဗာတီကန်မှ ဗီယက်နမ်နှင့် သံတမန် ဆက်ဆံရေး စတင်ရန် လတ်တလောနှစ်များတွင် ကြိုးပမ်းလျှက် ရှိသည်။ 
ဗီယက်နမ်တွင် အစိုးရမှ စီမံခန့်ခွဲသော ကျောင်းများ၊ ကောလိပ်များ၊ တက္ကသိုလ်များ များပြားစွာရှိပြီး ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းများ နှင့် ပုဂ္ဂလိက တစိတ်တပိုင်း ပါဝင်ပတ်သက်သော ကျောင်းများလည်း များပြားလာသည်။ ဗီယက်နမ်၏ အထွေထွေ ပညာရေးကို ၅ ပိုင်း ပိုင်းခြား နိုင်သည်။ ၎င်းတို့မှာ မူကြို၊ မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်း နှင့် တက္ကသိုလ်တို့ ဖြစ်ကြသည်။ နိုင်ငံတဝှမ်းလုံးတွင် စာတတ်မြောက်မှုကို မြှင့်တင်ရန် အတွက် အများပြည်သူ ဆိုင်ရာ ကျောင်းများကို အမြောက်အများ ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး စာတတ်မြောက်မှုနှုန်းမှာ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ၉၀.၃% မျှ ရှိသည်။
လူအများ ပါးစပ်ဖျားတွင် ရေပန်းစားသော တက္ကသိုလ်များမှာ ဟနွိုင်းနှင့် ဟိုချီမင်း စီးတီးတို့တွင် ရှိသည်။ အကြီးအကျယ် ကပ်ဆိုက်နေသော ဗီယက်နမ်၏ ပညာရေးစနစ်ကို ပြုပြင်ရန် အတွက် အစိုးရမှ အားလုံးပေါင်းစည်း လုပ်ဆောင်သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများကို လုပ်ဆောင်လျှက် ရှိသည်။ ပညာရေးစနစ်မှာ အခမဲ့ မဟုတ်သဖြင့် အချို့ ဆင်းရဲသော မိသားစုများမှာ အများပြည်သူဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပုဂ္ဂလိက ထောက်ပံ့မှုတို့မပါဘဲ သားသမီးတို့၏ ကျောင်းလခများကို ပေးနိုင်ရန် အခက်အခဲ ရှိနေကြသည်။ သို့သော်လည်း ကျောင်းတက်ရောက်မှုနှုန်းမှာ ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်တွင် ပါဝင်သည်။ ၂၀၀၀ ပြည်နှစ်များတွင် ကောလိပ်နှင့် တက္ကသိုလ်များ သိသာထင်ရှားစွာ များပြားလာခဲပြီး ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် ၁၇၈ ခုမျှ ရှိရာမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ၂၅၅ ခု အထိ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
၂၀၀၀ ခုနှစ်များ၏ အစောပိုင်းမှ စ၍ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသည် ငှက်ဖျားရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးတွင် သိသာထင်ရှားသော တိုးတက်မှု ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်သို့ ရောက်သော အခါတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ငှက်ဖျား တိုက်ဖျက်ရေး ဆေးများ နှင့် ကုသမှုများကို စတင်မိတ်ဆက်ပြီးနောက် ငှက်ဖျားကြောင့် သေဆုံးမှုမှာ ၁၉၉၀နှစ်များ နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၅% မျှသာ ရှိတော့သည်။ သို့သော်လည်း တီဘီရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမှာ မြင့်တက်လျှက် ရှိပြီး ၂၀၀၄ ခုနှစ် မေလတွင် တစ်ရက်လျှင် တီဘီကြောင့် သေဆုံးသူ ၅၇ ဦးခန့်မျှ ရှိသည်။ ကာကွယ်ဆေးထိုး အစီအစဉ်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ခြင်း၊တကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေး ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ခြင်း နှင့် နိုင်ငံခြား အထောက်အပံ့များကြောင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် တီဘီရောဂါ ဖြစ်ပွားမှု နှင့် နှစ်စဉ် တီဘီရောဂါ အသစ် ဖြစ်ပွားမှုတို့ကို သိသာစွာ လျှော့ချနိုင်ခဲ့သည်။
၂၀၀၅ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ဗီယက်နမ်တွင် အိတ်ချ်အိုင်ဗွီပိုး ရှိသူ ၁၀၁,၂၉၁ ဦးမျှ ရှိပြီး ၁၆,၅၂၈ ဦးမှာ အေအိုင်ဒီအက်စ် အဆင့်သို့ ရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီး ၉,၅၅၄ ဦးမှာ သေဆုံးခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း အိတ်ချ်အိုင်ဗွီ ပေါ့စတစ်ဇ် ရှိသောသူများမှာ ထိုစာရင်းထက် ပို၍ မြင့်မားသည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် တစ်နေ့လျှင် ရောဂါဖြစ်ပွားသူ အသစ် ၄၀မှ ၅၀ ဦးခန့်အထိ ရှိသည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် လူဦးရေ၏ ၀.၅% မှာ အိတ်ချ်အိုင်ဗွီ ရောဂါပိုး ရှိနေသည်ဟု ခန့်မှန်းရပြီး ထိုစာရင်းမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်အထိ ထိုအတိုင်း ရှိနေဆဲ ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ဗီယက်နမ်သည် တကမ္ဘာလုံးအတွက် အေအိုင်ဒီအက်စ် တိုက်ဖျက်ရေး အစီအစဉ် အသုံးစရိတ် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၅ ဘီလီယံ၏ တစိတ်တပိုင်းကို ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံမှ ကြေငြာခဲ့သည်။
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေမှုသည် ဆန်စပါး စိုက်ပျိုးသည့် စီးပွားရေး ပေါ်တွင် အခြေပြုသော ရှေးခေတ် ဒေသရင်း ဒေါင်ဆမ် ယဉ်ကျေးမှုမှ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော် ယဉ်ကျေးမှု၏ အချို့အစိတ်အပိုင်းများမှာ တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုတွင် မြစ်ဖျားခံပြီး ရိုးရာနိုင်ငံရေးစနစ် နှင့် အတွေးအခေါ်တို့တွင် ကွန်ဖြူးရှပ်အယူဝါဒ နှင့် တာအိုအယူဝါဒတို့မှ အစိတ်အပိုင်းများကို ယူငင်သုံးစွဲထားသည်။ ဗီယက်နမ် လူ့အဖွဲ့အစည်းသည် လန် ဟုခေါ်သော မျိုးရိုးစဉ်ဆက် ကျေးရွာများ ပေါ်တွင် အခြေပြုတည်ဆောက်ထားပြီး ဗီယက်နမ် လူမျိုးအားလုံးတို့သည် လ ပေါ်တွင် အခြေပြုသော ပြက္ခဒိန်၏ သုံးလပိုင်း ဆယ်ရက်နေ့တွင် မျိုးရိုးစဉ်ဆက်ဆိုင်ရာ စုပေါင်း နှစ်ပတ်လည်ပွဲကို ဆင်နွှဲကြသည်။ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်လာသူများ ဖြစ်ကြသော ကန်တုံ၊ ဟာကား၊ ဟောက်ကျန့် နှင့် ဟိုင်နန်တို့၏ ယဉ်ကျေးမှုများကိုလည်း တွေ့ရပြီး နိုင်ငံတော် ဘာသာ ဖြစ်သော ဗုဒ္ဓဘာသာသည် လူကြိုက်များသော ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဆက်စပ်ယှက်နွယ်လျှက် ရှိသည်။ လတ်တလော ရာစုနှစ်များတွင် အနောက်တိုင်း ယဉ်ကျေးမှု၏ လွှမ်းမိုးမှုများကို တွေ့မြင်ရပြီး အထူးသဖြင့် ပြင်သစ် နှင့် အမေရိကန် ယဉ်ကျေးမှုတို့ ဖြစ်သည်။
"Vietnam's new-look economy"၊ BBC News၊ 18 October 2004။ 21 November 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Weisenthal၊ Joe (22 February 2011)။ 3G Countries။ Business Insider။6August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Tonnesson & Antlov 1996, p. 117
Tonnesson & Antlov 1996, p. 126
"The Human Migration: Homo erectus and the Ice Age" Archived 12 November 2012 at the Wayback Machine.. Yahoo!. 27 May 2009. Retrieved 24 January 2013.
Kha and Bao, 1967; Kha, 1975; Kha, 1976; Long et al., 1977; Cuong, 1985; Ciochon and Olsen, 1986; Olsen and Ciochon, 1990.
"Dong Son culture" Archived 26 April 2013 at the Wayback Machine.. LittleVietnamTours.com.vn. Retrieved 28 January 2013.
Nola Cooke, Tana Li, James Anderson (2011). The Tongking Gulf Through History. p.46: "Nishimura actually suggested the Đông Sơn phase belonged in the late metal age, and some other Japanese scholars argued that, contrary to the conventional belief that the Han invasion ended Đông Sơn culture, Đông Sơn artifacts, ..."
Vietnam Fine Arts Museum (2000). "... the bronze cylindrical jars, drums, Weapons and tools which were sophistically carved and belonged to the World famous Đông Sơn culture dating from thousands of years; the Sculptures in the round, the ornamental architectural Sculptures ..."
Chinese Colonization (200BC – 938AD)။ Asia.msu.edu။ 25 August 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 28 April 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Country's Official Name။ Easy Riders Vietnam။ 18 July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Spears offer insight into early military strategy"၊ Viet Nam News၊ 22 January 2006။ Archived from the original on4March 2009။
The Trần Dynasty and the Defeat of the Mongols။ Countrystudies.us။ 28 April 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
The Lê Dynasty and Southward Expansion။ Countrystudies.us။ 28 April 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
The Kingdom of Champa။ Ancientworlds.net။ 28 April 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
The Chams: Survivors ofaLost Civilisation။ Cpamedia.com။ 10 January 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 28 April 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Colonialism by Melvin Eugene Page and Penny M. Sonnenburg via Google Books. p.723. Retrieved 24 October 2012.
"French Counterrevolutionary Struggles: Indochina and Algeria" (PDF). United States Military Academy. 1968. Retrieved6July 2013.
Fourniau, Annam–Tonkin, pp. 39–77
1930: 13 Viet Nam Quoc Dan Dang cadres, for the Yen Bai mutiny။ ExecutedToday.com (17 June 2013)။6July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Hirschman, Charles (1995). "Vietnamese Casualties During the American War: A New Estimate". Population and Development Review 21 (4): 783–812. doi:10.2307/2137774. Archived 20 June 2010 at the Wayback Machine.
Vietnam Notebook: First Indochina War, Early Years (1946–1950)။ Parallel Narratives။ 25 July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Declaration of Independence, Democratic Republic of Vietnam (2 September 1945). Vietnam Documents. Retrieved 15 October 2012.
Vietnam's 300 Days of Open Borders: Operation Passage to Freedom။ Library of Economics and Liberty (3 July 2012)။ 12 July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Moïse, Edwin (4 November 1998)။ The Geneva Accords။ Clemson University။ 12 July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Moïse, Edwin (4 November 1998)။ The Aftermath of Geneva, 1954–1961။ Clemson University။ 12 July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
The United States in Vietnam – An Analysis in Depth of America's Involvement in Vietnam. George McTurnin Kahin and John W. Lewis (1967). Delta Books.
Turner၊ Robert F. (1975)။ Vietnamese Communism: Its Origins and Development။ Hoover Institution Publications။ p. 143။ ISBN 978-0817964313။
Courtois၊ Stephane; et al. (1997)။ The Black Book of Communism။ Harvard University Press။ p. 569။ ISBN 978-0-674-07608-2။ Explicit use of et al. in: |first= (အကူအညီ)
Newly released documents on the land reform။ Vietnam Studies Group။ 2016-07-15 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “Vu Tuong: There is no reason to expect, and no evidence that I have seen to demonstrate, that the actual executions were less than planned; in fact the executions perhaps exceeded the plan if we consider two following factors. First, this decree was issued in 1953 for the rent and interest reduction campaign that preceded the far more radical land redistribution and party rectification campaigns (or waves) that followed during 1954-1956. Second, the decree was meant to apply to free areas (under the control of the Viet Minh government), not to the areas under French control that would be liberated in 1954-1955 and that would experienceafar more violent struggle. Thus the number of 13,500 executed people seems to bealow-end estimate of the real number. This is corroborated by Edwin Moise in his recent paper "Land Reform in North Vietnam, 1953-1956" presented at the 18th Annual Conference on SE Asian Studies, Center for SE Asian Studies, University of California, Berkeley (February 2001). In this paper Moise (7-9) modified his earlier estimate in his 1983 book (which was 5,000) and accepted an estimate close to 15,000 executions. Moise made the case based on Hungarian reports provided by Balazs, but the document I cited above offers more direct evidence for his revised estimate. This document also suggests that the total number should be adjusted up some more, taking into consideration the later radical phase of the campaign, the unauthorized killings at the local level, and the suicides following arrest and torture (the central government bore less direct responsibility for these cases, however).” cf. Szalontai, Balazs (November 2005). "Political and Economic Crisis in North Vietnam, 1955–56". Cold War History 5: 395–426. cf. Vu၊ Tuong (2010)။ Paths to Development in Asia: South Korea, Vietnam, China, and Indonesia။ Cambridge University Press။ p. 103။ ISBN 9781139489010။
Turner၊ Robert F. (1975)။ Vietnamese Communism: Its Origins and Development။ Hoover Institution Publications။ pp. 174–178။ ISBN 978-0817964313။
Spencer C. Tucker, ed. (2011)။ The Encyclopedia of the Vietnam War: A Political, Social, and Military History။ ABC-CLIO via Google Books။ ISBN 9781851099610။ 14 July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
JFK and the Diem Coup။ National Security Archive (5 November 2003)။ 12 July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
This Day in History (Sep 3, 1967): Thieu-Ky ticket wins national election။ History.com။ 26 November 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Vietnam War။ Seasite.niu.edu။ 28 April 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"The War's Costs". DigitalHistory.uh.edu. 2006. Retrieved 25 February 2014.
Soviet Aid to North Vietnam။ GlobalSecurity.org။ 12 March 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Chinese Support for North Vietnam during the Vietnam War: The Decisive Edge။ Military History Online (2008)။ 17 April 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Riding Vietnam's Ho Chi Minh Trail။ The Guardian (28 July 2011)။ 12 July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Tet Offensive". Vets With A Mission. Retrieved 10 October 2012. "...NLF/NVA troops and commandos attacked virtually every major town and city in South Vietnam as well as most of the important American bases and airfields...In Saigon, nineteen VC commandos blew their way through the outer walls of the US Embassy..."
The Massacre at Hue။ TIME (31 October 1969)။ 8 March 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Turner၊ Robert F. (1975)။ Vietnamese Communism: Its Origins and Development။ Hoover Institution Publications။ p. 251။ ISBN 978-0817964313။
Vietnamization။ The Free Dictionary။ 12 July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Saigon's Finale"၊ New York Times၊ 13 October 1999။ 14 July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Robbers၊ Gerhard (30 January 2007)။ Encyclopedia of world constitutions။ Infobase Publishing။ p. 1021။ ISBN 978-0-8160-6078-8။ 1 July 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Shenon၊ Philip။ "20 Years After Victory, Vietnamese Communists Ponder How to Celebrate"၊ 23 April 1995။ 24 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Associated Press (3 April 1995). "Vietnam Says 1.1 Million Died Fighting For North."
Elliot၊ Duong Van Mai (2010)။ "The End of the War"။ RAND in Southeast Asia: A History of the Vietnam War Era။ RAND Corporation။ pp. 499, 512–513။ ISBN 9780833047540။
Re-education in Unliberated Vietnam: Loneliness, Suffering and Death။ The Indochina Newsletter (October–November 1982)။ 2016-09-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Vietnam Outlines Collectivization Goal"၊ Google News Archive၊ 28 June 1977။ 20 July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Cambodia – The Fall of Democratic Kampuchea. U.S. Library of Congress. Retrieved9July 2013.
Photographer Showcases Legendary Khmer Temple Preah Vihear။ National Geographic (23 June 2009)။4August 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 July 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Chinese Invasion of Vietnam – February 1979. GlobalSecurity.org. Updated 2011. Retrieved6October 2012.
Stowe, Judy (28 April 1998). "Obituary: Nguyen Van Linh". The Independent (London). p. 20.
Ackland, Len (20 March 1988). "Long after U.S. war, Vietnam is stillamess". St. Petersburg Times (Florida). Page 2-D.
Murray, Geoffrey (1997). Vietnam: Dawn ofaNew Market. New York: St. Martin's Press. p. 24–25. ISBN 0-312-17392-X.
Hoang Thi Bich Loan။ "Consistently pursuing the socialist orientation in developing the market economy in Vietnam"၊ Communist Review၊ TạpchíCộngsản.org.vn၊ 18 April 2007။ Archived from the original on 10 May 2011။
Palace of Supreme Harmony in Hue (Vietnam) "On decomposing the causes of health sector inequalities with an application to malnutrition inequalities in Vietnam" (2003). Journal of Econometrics 112: 207. doi:10.1016/S0304-4076(02)00161-6.
"Rising Gender Inequality in Vietnam Since Reunification" (1995). Pacific Affairs 68 (3): 342–359. doi:10.2307/2761129.
Gallup, John Luke (2002)။ The wage labor market and inequality in Viet Nam in the 1990s။ Ideas.repec.org။7November 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Johnson, Kay။ "The Spoils of Capitalism"၊ Time၊ 22 February 2007။ 19 May 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"A bit of everything: Vietnam's quest for role models"၊ The Economist၊ 24 April 2008။ 19 May 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ (အသင်းဝင်ရန် လိုအပ်သည်။)
"UN urged to act on Vietnam over death penalty"၊ 12 February 2014။ 12 February 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
International Institute for Strategic Studies; Hackett, James (ed.) (3 February 2010)။ The Military Balance 2010။ London: Routledge။ ISBN 1-85743-557-5။ CS1 maint: extra text: authors list (link)
The SIPRI Military Expenditure Database Archived 23 January 2016 at the Wayback Machine.. Retrieved3May 2012.
Escalating Tensions in the South China Sea။ The National Interest (10 September 2012)။
Vietnam Foreign Policy။ Ministry of Foreign Affairs။ 25 February 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
List of countries which maintain diplomatic relations with the Socialist Republic of Vietnam။ Ministry of Foreign Affairs (December 2007)။ 25 February 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
US-Vietnamese Relations။ US Embassy။9December 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 8 December 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Vietnam and International Organizations။ Ministry of Foreign Affairs။ 25 February 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Matt Spetalnick။ "U.S. Lifts arms ban on old foe Vietnam as regional tensions simmer"၊ March 23, 2016။ March 23, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Vietnam – Geography". Index Mundi. 12 July 2011. Retrieved 19 December 2011.
"Agricultural advanced technologies in Red river delta, Viet Nam these days"၊ Agroviet Newsletter၊ September 2005။ Archived from the original on 21 February 2008။
Báo cáo Hiện trạng môi trường quốc gia 2005 (in Vietnamese)။ 23 February 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
Edwards's Pheasant (Lophura edwardsi)။ BirdLife International။ 1 September 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Kinver, Mark။ "Javan rhino 'now extinct in Vietnam'"၊ BBC News၊ 25 October 2011။ 25 October 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
World Economic Outlook: Vietnam။ International Monetary Fund (October 2013)။ 14 February 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
The Vietnamese Stock Market။ Financial Women's Association of New York။5October 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။7May 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Vietnam may be fastest growing emerging economy" (သတင်းထုတ်ပြန်ချက်)။ PricewaterhouseCoopers။ 12 March 2008။ 20 October 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Vietnam to be listed among top economies by 2050: HSBC". Tuổi Trẻ News. 14 January 2012. Retrieved 18 April 2012. Archived 16 January 2012 at the Wayback Machine.
Vuong, Quan-Hoang; Tran, Tri-Dung (2009). "The cultural dimensions of the Vietnamese private entrepreneurship". Icfai Journal of Entrepreneurship Development, Vol. VI, Nos.3&4(September & December 2009), pp. 54–78. Icfai University Press via SSRN. Retrieved4October 2012.
Vietnam 2010 growth fastest in three years – Vietnam Banking Finance News။ Vietfinancenews.com (29 December 2010)။4January 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။6August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Vietnam။ United States Energy Information Administration (2011)။6November 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Fong-Sam, Yolanda (August 2012) "Vietnam" in 2010 Minerals Yearbook. USGS. Archived2March 2013 at the Wayback Machine.
Economy of Vietnam. CIA World Factbook. Updated 21 September 2012. Retrieved4October 2012.
Vandemoortele, Milo (2010)။ Viet Nam's Progress on Economic Growth and Poverty Reduction: Impressive improvements။ Overseas Development Institute။
Vandemoortele, Milo (2010)။ The MDG fundamentals: improving equity for development။ Overseas Development Institute။
Vietnam Vrooooom: Asia's second-fastest-growing economy takes the global stage. CNN Money. 13 November 2006.
Developments and trends of Vietnam international merchandise trade in June and the first half of 2013။ Vietnam Customs။ General Department of Vietnam Customs (23 July 2013)။ 31 July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
How Vietnam becameacoffee giant - BBC News။ bbc.com။
"Vietnam-EU free trade agreement set to fire"၊ Vietnam Tribune။ 19 May 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 19 May 2014။
"Vietnam To Build US$600m National Space Center By 2018". Asian Scientist, 22 November 2011. Retrieved 27 November 2011.
"Nano technology | Computer | Robot | TOSY TOPIO – Table Tennis Playing Robot"၊ DigInfo News၊5December 2007။ 12 February 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 21 May 2009။
"Tech, science spending too low". VietNam News, 21 December 2010. Retrieved 30 April 2012.
Vietnam Airlines Details and Fleet History။ PlaneSpotters.net (1 April 2010)။ 1 April 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Fleet Information။ Vietnam Airlines။4October 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 30 June 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Social and economic situation, 8 months of 2011. General Statistics Office of Vietnam. Retrieved 1 September 2011.
"High-speed train planned for Vietnam – Business – International Herald Tribune"၊6February 2007။9July 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Vietnam to build high-speed rail"၊ 13 November 2009။9July 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Index Mundi. January 2012. Retrieved 25 April 2012.
"Water taxi in Ca Mau city, Vietnam". TravelBlog. 27 January 2010. Retrieved 25 April 2012.
"Territorial claims in the Spratly and Paracel Islands". GlobalSecurity.org. 2011. Retrieved3February 2013.
Vietnam – population။ Countrystudies.us။ 11 April 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Fertility rate, total (births per woman)။ World Bank။ 12 March 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Under South Vietnam Rule" Archived6October 2012 at the Wayback Machine.. MHRO.org. 2010. Retrieved 21 April 2012.
Frequently Asked Questions။ Montagnard Foundation (12 August 2007)။4January 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Annexe au procès-verbal de la séance du 1er octobre 1997 (in French)။ French Senate (1 October 1997)။ 25 July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
The Role of English in Vietnam's Foreign Language Policy: A Brief History။ 31 August 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 February 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Ngan Nguyen (December 2012)။ How English Has Displaced Russian and Other Foreign Languages in Vietnam Since "Doi Moi" (PDF)။ International Journal of Humanities and Social Science။ 18 July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Education in Vietnam, The World Bank
Home Office: Country Information and Guidance — Vietnam: Religious minority groups. December 2014. Quoting United Nations' "Press Statement on the visit to the Socialist Republic of Viet Nam by the Special Rapporteur on freedom of religion or belief". Hanoi, Viet Nam 31 July 2014. Vietnamese. Quote, p. 8: "[...] According to the official statistics presented by the Government, the overall number of followers of recognized religions is about 24 million out ofapopulation of almost 90 million. Formally recognized religious communities include 11 million Buddhists, 6.2 million Catholics, 1.4 million Protestants, 4.4 million Cao Dai followers, 1.3 million Hoa Hao Buddhists as well as 75,000 Muslims, 7000 Baha’ís, 1500 Hindus and others. The official number of places of worship comprises 26,387 pagodas, temples, churches and other religious facilities. [...] While the majority of Vietnamese do not belong to one of the officially recognized religious communities, they may nonetheless – occasionally or regularly – practise certain traditional rituals, usually referred to in Viet Nam under the term "belief". Many of those traditional rituals express veneration of ancestors. [...]"
The 2009 Vietnam Population and Housing Census: Completed Results။ General Statistics Office of Vietnam: Central Population and Housing Census Steering Committee (June 2010)။ 12 March 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Beliefs and religions။ Embassy of Vietnam။ 10 February 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 28 April 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
CIA World Factbook- Vietnam။ Central Intelligence Agency။6August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Zuckerman, Phil. "Atheism: Contemporary Rates and Patterns" (PDF), from the Cambridge Companion to Atheism (2007), edited by Michael Martin. University of Cambridge Press. Retrieved 23 May 2012.
Jordan, Sandra။ "Vietnam's Christians persecuted as state sees hidden enemy"၊ The Independent၊ 15 October 2004။
Holy See and Vietnam discuss opening of diplomatic relations။ AsiaNews.it (27 February 2012)။ 16 May 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
No: 21/2004/PL-UBTVQH11 Ordinance on Beliefs and Religions။ Ministry of Justice (29 June 2004)။ 21 September 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Vietnam: The Suppression of the Unified Buddhist Church". Human Rights Watch. March 1995. Retrieved 17 December 2011.
Ataglance: Viet Nam – Statistics။ UNICEF။7November 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
School enrollment, primary (% net)။ World Bank (2012)။9July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Progression to secondary school (%)။ World Bank (2012)။9July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Pocket World in Figures။ The Economist။ 2009။ ISBN 978-1-84668-123-3။
Mortality rate, infant (per 1,000 live births)။ World Bank (2008)။ 13 September 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Tackling child malnutrition in rural Vietnam။ Plan Vietnam (2008)။9July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Vietnam country profile (PDF). Library of Congress Federal Research Division. December 2005. Retrieved9July 2013. This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
Med School Professor Praises North Vietnam's Medical Care။ The Harvard Crimson (13 December 1972)။ 31 January 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Prevalence of HIV, total (% of population ages 15–49)။ World Bank (2007)။ 13 September 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Gio To Hung Vuong 2013။ PublicHoliday.org။3March 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 February 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Animism in Vietnam's culture" Archived 18 June 2012 at the Wayback Machine.. Vietnam-Holidays.co.uk. Retrieved 1 October 2012.
Vietnam's cultural integration seen by researchers။ Voice of Vietnam (7 December 2012)။ 24 December 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Law on Publication (No. 30/2004/QH11 of3December 2004)။ Ministry of Justice။ 18 December 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 21 September 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Muting the Messengers: Vietnam's Press Under Pressure"၊ The Economist၊ 15 January 2009။ 17 January 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Wilkey, Robert N (2002). "Vietnam's Antitrust Legislation and Subscription to E-ASEAN: An End to the Bamboo Firewall Over Internet Regulation?". John Marshall Journal of Computer and Information Law 20 (4).
OpenNet Initiative (9 May 2007)။ Country Profile: Vietnam။ 15 July 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Reporters Without Borders။ Internet Enemies: Vietnam။ 17 March 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 July 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"OpenNet Initiative Vietnam Report: University Research Team Finds an Increase in Internet Censorship in Vietnam"၊ Berkman Center for Internet & Society at Harvard University၊5August 2006။ 15 July 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Opera—Vietnam။ Encyclopedia of Modern Asia (2006)။ 10 July 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 August 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Southeast Asian arts Vietnam"။ Encyclopædia Britannica Online။ Encyclopædia Britannica။ 23 July 2008။ p. 36။
Folk poetry preservationalabour of love။ VietNam News (29 June 2010)။ 12 February 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Vietnamese Traditional Music: Hat Ca Tru။ Indochina Travel Plan (2012)။ 10 March 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Vietnamese Poetry။ Le Cercle Littéraire – Thế Hữu Văn Đàn – The Literary Forum (21 June 2008)။ 25 February 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 February 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Quyết định số 2473/QĐ - TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt "Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"။ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (31 Dec 2011)။
Vietnamtourism။ Vietnamtourism။ 13 May 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။7November 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Southeast Asia's largest artificial sea inaugurated in Binh Duong (19 January 2009)။7November 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Joe Jackson invests in Vietnam theme park"၊ The Star၊ 14 February 2011။
"Ao Dai (Long Dress)". Active Travel Vietnam. Retrieved2January 2012.
Erik Harms (2011). Saigon's Edge: On the Margins of Ho Chi Minh City. p.56: "She then left the room to change out of her áo Ba Ba into her everyday home clothes, which did not look like peasant clothes at all. In Hóc Môn, traders who sell goods in the city don "peasant clothing" for their trips to the city and change back".
Binh Dinh to host Int'l Vovinam festival။ TalkVietnam.com (6 July 2012)။ 16 November 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Soccer is very popular in Vietnam။ SaigonNezumi.com (2 August 2012)။ 16 November 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Vietnam။ Olympic.org။ 19 April 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"The country that just won its first ever Olympic gold - and what the athlete will get in return" (in en-GB)၊ 2016-08-07။
Vietnamese Food. Asianinfo.org. Retrieved3February 2013.
Vietnamese Ingredients။ WokMe (2011)။2December 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Corapi, Annie။ "The 10 healthiest ethnic cuisines"၊ CNN Health။3December 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Nguyen, Andrea (13 March 2011)။ Heaven inaBowl: The Original Pho။ 28 December 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။